Miyay Is Dhiibayaan, Waa Maxay Shirkan Jaraa’id? « HiilDan.Com
Home › Warka (News) › Miyay Is Dhiibayaan, Waa Maxay Shirkan Jaraa’id?
Miyay Is Dhiibayaan, Waa Maxay Shirkan Jaraa’id? By hiildan on August 10, 2012	• ( 31 )
Share this:ShareFacebookTwitterGoogle +1PrintEmailLinkedInLike this:Like Loading...« Waddac-Waddac Yaa Ramadaan, Wa fii daacatika yaa Ramadaan,Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Wuxu Noqon Doonaa Reer Woqooyi(Somaliland) »Categories: Warka (News)	Related Articles
Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo Marti Qaaday Ugaaska Beelaha Gadabuursi.	Hodan C/Raxmaan Dheere, Waa Fanaanad Qaran, Oo Ay Dhaleen Fannaaniin Qaran: Maxaa Ku Jaban Hadday Ka Qayb Gasho Xuska 18-ka May?	Todobaadkan Iyo Sheekadii Ugu Hadal Haynta Badnayd UK: Dr Siilaayo, Xirsi, Dr Maxamad vs Jaalliyada Awdal UK	Maanta Waa Maalin Khayr Badan: Soo Dhawoow Ugaas C/Rashiid	Professor Axmad Ismaaciil Samatar: CANARY IN THE COAL MINE (Somalia)	Xildhibaan C/Xakiim Cige Guuleed, OO Ka Hadlay Wadahadalkii Somalia iyo Somaliland ee Turkey	31 replies	»
Marunbaa	August 11, 2012 • 03:04	Is dhiibaayo iyo isma dhiibinaaba, anigu marlay sacaba tunkan lala daba ordayey waxan u arkayey uun heela carabi. Aduun yadii bay nagu ceebeeyeen. Kuwa soo xolay in ayna haba yaraatee cilmi u lahayn orodada iyo in ayna waxba ka xishoon waxba kama dhaxeeyaan. Orodku waa wax karti iyo shaqo adag lagu gaadho heerka tartan markaad gaadhana aduunkaa laysku soo ban dhigaa balse reer xamar, gabadhyar oon xitaa socodkii caadiga ahaa aaboodi karin bay masraxa soo dhigeen. Saacad xumida orod xumidaa ka daran. I cannot use any other term other then SHAME. Waxan rajaynayaa in sanadka danbe isla xishoon doonaan. By the way, what is wrong with Abdi Bile Abdi, How come he cannot say, this is not the right way and at least ask them to send representatives rather than unqualified runners.
Reply ↓	Walo	August 11, 2012 • 08:39	dadku way bahaloobeen. nin walba bacdiisa ayuu dhuujisanayaa. cabdi bile cid waxka dhagaysanaysa malaha.qadarin iyo ixtiraana majiro.
Tankale inta ay ku wareegaysanyaan kalmada waad garankartaa muqdisho garoon malaha. waxaa ladhahaa dawlada ingriisku managa caawin kartaa in aan london tababarka ku qaadano. hadii ay maya tahay maxaad nagu caawin kartiin ee kale?
Reply ↓	Isaq Boy	August 11, 2012 • 11:51	Iska daaya masaakiinta ha is dhiibaan haday doonaane. Sow inagaa maca madaxdeenu Wada dhiiban.
Ceebna may soo jiidin ee intay ordi karayeen way ordeen waxna iskamay hakran. Danbigana malaha iyagu.
Reply ↓	hiildan	August 11, 2012 • 12:14	Anuu bilowgiiba waan iska garanayay in carruurtan lagu soo qaatay mashruuc inay is dhiibaan. Dadka daba ordayay waxay wada ahayeen dilaal iyo mullaal waddaniyaddu ku diiq tahay. Welcome to UK.
Reply ↓	Ali-Durgiye	August 11, 2012 • 12:20	Runtii aanu ma garan sababta lagu haystu labadan dhalin yaro waxay ka soo bexeen dal iyo dad ku dhoow in calamka laga tirtiro waxayna tuseen aduunka in ay soomaalidu yara liicday ee ay wali laf dhabarta ka jabin umanaa baahna in ay is dhiiban ee haddi loo dadaalo waxay ku noolaan karan dalka Britain iyagoon qaxooti dalban,tababar fiican iyo daryeel wanaagsan way heli lahaayeen si ay ciyaaraha olompi-ga dambe kaalin dan maanta ka saraysa u gaadhan.
Reply ↓	DarbiSamaroon	August 11, 2012 • 14:18	Adeer caruurtan madfacii ayaa dhagahooga kasii qaylyaaya,Hoobiyaa sigay,Mayd bay ka dul talaabsadeen maxay ordi maskaxdooda waxaa ka dhex guuxaaya dhib iyo halaag,Ha is dhiibeen oo ha qaateen tamabar fiican,MO Farah oo kale ayay noqon marka ay qaataan tareerin fiican macalin fiicanaha helo tan yar ee dalba juuqada lehna ee markay ordayso lugaha isku marmaraysana sida laastiiga ayaa lookala jiidi oo dhulka is haysta oo dhan ayaa laka furi doonaa,Waxaad arki doontaan Olompikada dambe ayadoo sida Farska u ordaysa,Isdhiiba oo ka raysta madfacii .
Reply ↓	Haboon	August 11, 2012 • 15:49	Reply ↓	Timacade	August 11, 2012 • 16:01	House Negro VS Field Negro: That is the Gist of this conversation…….
War Ali Durgiyow afkaaga caano lagu qabay. Bal u fiirsada videogan waxanad arkaysan wadaninimo waxay tahay, naxariis iyo dadnimo waxay tahay, marka aan arko nin weyn oo oday ah oo somali ah oo ilini uga daadatay, dhibta soo gaadhay ilmo somaliyeed oo aanu isagu dhalin, waxa i gala yididiili in ay weli somalia jiraan dad caqliga u saxiib ah. Marka aan arko gabadhan iyo wiilkan, ma arkaayo anigu inay badin waayeen ordodaii aduunka ee waxan arkayaa “spirit of Humanity, diginity, grace and preseverance”. Waa qof aan waxba haysan uu ku tartamo , lakiin spirit kiisii la jabin kari waayey oo soo taagan. Waxa madaxayga soo galay meesha ay ka yimaadeen ee caruuta da’dooda ah maalin walba dhegta dhiiga loo daro, ee aanay gabadh yar oo somaliyeed aanay surwaal gashan karin si ay u orodo, oo xitaa haddii ay xabada ka nabadgasho ay halis ugu jirto inay badda ku dhimato iyadoo nolol raadis ah sida uu Mudane Cabdi Bile ku sharxayo Videoga hoose.
Aniga Shaki igagama jiro inay kuwa xag jirka ah ay raadsanyaan oo dilayaan oo ay ” example” ka dhigayaan haddii ay xamar ku noqdaan, sidaa darteed, waan ku raacsanahay inay noloshooda badbaadiyaan.
Inta halkan ka dhaleecaynaysana, waa house negro VS Field Nigero. Waa sheekadii daa’imiga ahayd ee ninka madow ee ay slave holders ku gurigooda ka shaqeeya oo nici jiray inay kuwa madow ee field ka ka shaqeeya ay kasoo ag dhawaadaan. waa Hypocrisy at it’s Higest level…..
Timacade & Hannimuufo
Reply ↓	Isaq Boy	August 11, 2012 • 17:30	kkkkkkkkkkkkkk Timacade.
waad la heshay midhaa walaahi kuwan diidaya inay is dhiibaan labadan orod-yahan… iyagiibaa bari hore is dhiiboo way ka khajilayaan hadana inay laba kale oo hadda yimi ku soo biiraan sagaalka boqol ee kun ee soomaalida ah ee already dibadaha ka dhiiban kkkkkkk
Reply ↓	slander	August 11, 2012 • 17:47	ramadaan kariim aariskadaaya haisdhiibane waa wlalheen dhiban haysata
Reply ↓	Timacade	August 11, 2012 • 18:05	Isaaq Boy……Waxa maraykanka nagusoo mara dad badan oo somalia ka yimaada oo canada iska dhiiba. Mid markuu galo ee la aqbalo kuwii kale ee ka dambeeyey wuu ka cabsiinayaa oo waxuu uga dhigayaa meesha inay caqabadi taalo iyo dhib badan oo waxad mooda inaanu rabin inuu canada soo galaan somali kale. Hadda Canada waa wadan marykanka ka weyn gebigeedana 30 milyan oo qof baa degan. Markaa somalidu waa wada house negros oo midba ka ka dambeeya ayuu cadaadinayaa si aanu u helin waxa uu isagu naftiisa iyo caruurtiisa lasoo doonto.
Dee anigu waxaan aqaan Somali badan oo qurbaha iyo dhulkiiba joogta oo uu ooya ilma kasta oo somali ah oo dhib, gaajo iyo colaadi soo gaadho, lakiin inta badan waxan media ha ku aragnaa siyaasi iska yeel iimaan la’ oo aan moral sare lahayn oo dhibta caruurteenii haysataa aanay damqayn. Waan ku faraxsanahay inay dadka arkaan qof moral kiisu sareeyo oo isagoo aan jufo jufo u eegayn u oohi, ilama somaliyeed oo noloshiisii wayey isagoo da’yar. Ilaahay darajo sare ha gaadhsiiyo kuwa u damqada, iskuna daya inay badbaadiyaan ilmo somaliyeed oo dhibi haysato…..
Reply ↓	Isaq Boy	August 11, 2012 • 20:32	Timacade
waxaad tahay qof qalbigiisu wayn yahay.. oo noool
Reply ↓	Marunbaa	August 12, 2012 • 00:50	Timacade, waa sidee waad is cajabisee. Cid dhalintan diidan inay is dhiibaani ma jirto balse munaafaqada wadani nimada ee beenta laga sheegayo ayaa anaka noo muuqata adiga se kaa dahsoon. Ciyaal kani kuma soo bixin xulasho caruurta dhigooda ah la siiyey ee waxay ku soo baxeen aqliga hooseeya ee koonfur maanta xaqiiqda ka ah. Markaa hadii aad indho la aani kaa hayso runta dee wax lagaa qoraa iska yar. Kalmada sprit ka eed ku celcelisay runtii uma qalanto labada ciyaala iyo mashruucay ku soo baxeena wuxuu ahaa munaafaqad aan loo xad dayin. Markaa hadal waxan kuugu soo koobi, xal xaaraanihi nirig xalaala ma dhasho. Mid na waan kuugu dari, I cannot say the boy but the girl was not a nunner and will never be one but the young man has potential in him if he gets the right training.
Reply ↓	timacade	August 12, 2012 • 03:24	Waryahee Marunbaa come on man. Dee bal ilaahbaan kugu dhaarshee look at this video and tell me waxay iska hagratay inantan yari She is got the spirit of Olympian. Marunbaa saxiib somaliland oo dhan laga heli kari maayo gabadh surwaal gashata, iskaba dhaaf to orodee, hada weliba waa meesha kaliya ee somali nabadi ka jirto, Zamzam meel ay shabaab joogto ayey kasoo dhexbaxday, dee how much more courageous should she be? Marunbaa saxiib meesha maba jirto infrastructure iyo security toona dee maxaad ka fili meel sidaas ah. Reply ↓	HanniMuufo	August 12, 2012 • 11:52	Salaan sare dhamaan,
Mahadsanidina inta mucaradka iyo inta wadaniyiinta ah ee halakan ku shekeysanaysa. Waxay Somalidu ku mahmahdaa Afjoogo looma adeego. Waxan halkan inaga wada tusayaa Samzam in aay dhulkeega jeceshay sidi indheheeda aanay meel kalena ku dooran doonin!. Waliba inti aanay orodka ka qayb gelin baa asxaab badani kula talisay in aay is dhiibto. Asxabtaana isla markii ayeey hees ahaan ugu sheegtay waxa qalbigeega ka guuxaya iyo jacaylkay u qabto Dhulkeeda!. Wiilka anuu info badan kama hayo ragu how doodeen anuu gabadhaa yaan layga bahdilin baan si naxariisleh uga codsanayaa mucaradiinta jiritaanka Somalieedeey!.
Anuu intaan ku dhihi lahaa Qalbi u roone Mr Timacadaa ii hadlay. Lakin ani iyo aduu si aad oo wayn baan isu garanaynaa. Waxan xusustaa in Calankaa blue ga ah as heavanly aan u jecelahay malin uu mandiilka kula mid ahaa!. Goortaad ceeb Somali soo gaadhay u jaxanjaxaysaan anuu garan la’ahay!.
Yaa waylak aan ku iri iga daa rogrogashada. Laba mid dooro mucarad ama wadani?
Heesti oo aay wadada ku qadayso.
Heesti oo la habeeyey markay calanka Blue ga ah saraqaaday. Eeboow mahadaa……..
Gobanimo waa loo dhashaa oo dhiiga DNA ga la yidhaahdo ee layska dhaxlaah weeye.
Inan walboo Somaliyeedna sidan bay tahay lakin maskaxdaa caade qaate yaali ka gumeyeen!. Fadlan hablaha tageera iyagaa kadarta naga saari karee. Inantii xoriyad buuxdaa heshahi waxay ku fekertaa in wadankeegu canahu bambadaha ka socdaan. Oo aan bahi iyo rafaad la’arag. Waa hooyo natural ah waxad na ka arkikartaan Holland canaha bambado ka socdaan goobaha laysugu yimaado iyo xafiisyada mmmmmmm. Imagine caano baambad ka socdo kkkkkkkk. Waa fikrad haween. Wagan xerada qaxootiga ee Beatrix ee magalada Eindhoven ku jiray 1998. Rag Somaliyeed baan maqli jiray iyagoo bambad caano ku shubanaya hadana leh waa naskii boqorada! Hooy jisaar jano ma galo baan raacshay!. Madama aan dulmi diid ahay.
Gabigiina waan inii ducayn in ubadka Somaliyeed ee tabalaysani malin caanuhu bambadaha uga yimadaan baan ugu ducayn Somalia.
Mahad gaar ahna Mr. Abdi Bile Abdi. Anuu ma ogayn in inan Somaliyeed oo noo dadashay biyaha Libia ku nafwayday lakin xalay I did may duty shan shumac iyo cuud baan walashay u shiday oo shanta Somaliyeed matalaya waxana u rejeynayaa uguna ducaynayaa in Eebehey meel dhaanta waxay la kulantay geeyo. Dacadi wadnahay xanuunayo hadaan dhibka nahaysto flashback ku samee is irahdo!.
Reply ↓	HanniMuufo	August 12, 2012 • 12:17	Gabadhaan morelkeega ayaa aad u heer sareeyo. 20 sano ayeey colaad ku dhalatay kuna soo barbaartay. Anuu 1 sano oo colaada ayaan ku nolaa Muqdisho 20 sano na dhulal nabad iyo barwaqo ah. Halka sano ayaa morelkaygu ku burburay. Imagine hadaan hees wadani ah qaad is iraahdo emocional ayaan noqon sport aan guul kasoo hoy is irahdana weligey ba ma damcin oo courage kaaba malihi. Intaa isku dayiideeda ayaaban naruuro ah oo rejo iyo nolol iftiin ah uga jedaa.
Reply ↓	Marunbaa	August 12, 2012 • 12:45	Timacade, waxba ma hagran hadiyad layskuma siiyo. Orodku waa shay loo tartar tamo in la mutaysto mana aha wax lays ku garto. Aduunku xadbuu u cayimey iyo xushmad balse ninkaan waxba ka xishooni xad male. Dhalintan aad ku adkaysanayso taageeradoodu haba yaraatee wax kartiya may lahayn kamana muuqan balse waxan hubaa in kun aan waligood orod isku dayin oo gabadhaa ka fiicnaan lahaa xamar laga heli lahaa waxayse kusoo baxday marlay waa qaraaba kiil iyo munaafaq nimadii reer koonfureed. Malaha waxba war kama hayside, somaliya waxay kaga qayb gashay olympic kada wax la yidhaa Wild Car wadano badan oo loo gartaana way jiraan balse way ka xishoodaan in ay aduunka isku hor ceebeeyaan balse indho adayg uun iga dheh. Believe it or not, somaliland is full of talented runners a thousand times better but time and political uncertainty holds them back. In the eyes of somali supporters they were heroes but to the sportsmanship viewers in the world it was shame on us.
Reply ↓	Ali-Durgiye	August 12, 2012 • 13:15	Marunba,
oo horta ma waxaad ka mid ahayd dhalinti uu Axmed saalax waalay waa adigan leh waan ordi jirayda hayee?
Marunbayoow doqoni kuuma sheegaysee orodka Ahmed saleh waxaan ka mid noqday ragi Ahmed ku daba haraaday oo ugu yaran laba jeer ayaan min Escal ila xeradi kubadi isku dayey laba jeer oo kalana min Dooraale ila xera kubada ayaan afka daloolshay,laakiin maxaa 4ta jeerba iga raacay kkkkkkkkkk.
Marki Escal laga orday dadka qofkii ugu dambeeyey marku maraayo warshadi coca colaha aanu waxaan jiitamaayey guriga madaxtooyada hoostiisa, xera kubada haddi lagu wada dhammaaday aanu waxaan roclaynaayay xeebta (la siesta) Dooraale warkiisaba maxaan kaaga sheegi marka saxiib orodku waa hibo iyo talaanti qofka illaahay ku manaystay carbis iyo tabo barna iyo dhaqaalana u baahan dadkana way buuxaan dhalin hibadaa leh wakhtibay u baahan tahay in laga dhul sugo.
Reply ↓	godan	August 12, 2012 • 13:21	Qof ila daawanayaan ku idhi maanta way ina ceebeeyeen waxba kama xishoodayaashii,waa la ila yaabay inagaase runtii isku aragti ah kolaba dibada ha loo qaado iyo musuqmaasuq ayaa ka danbeeyay,si laysku dhiibo.
Reply ↓	godan	August 12, 2012 • 13:25	Yaa arkay Geesi Makaahiil waan u xiise ,salaan iga gaadhsiiya Sahal yarana waan baafinayaa.
Reply ↓	HanniMuufo	August 12, 2012 • 16:29	Godan kkkkkkkkkkkkk,
Oo aduuba labo wadan baad caydh ka qadatahe maxaad ugu diidi ubadkan aad dhali karto in aay nolol dhaanta midad soo aliftay eed kaga soo baxsatay helaan?. Ceebtuse maxay tahay mesha taala waba dadaleen oo ani iyo adoo ka nasiib ronaaba ma awoodno in aan Calanka Somalia xitaa palkony geena ka taagno ganaax baa nalagu dhufan waad ogtahaye kkkkkkkkkk.
Reply ↓	godan	August 12, 2012 • 16:40	Xagee lagu arkay minyaro hinaasta kkk waa arrin nagu cusub hadaan reer boorama nahay horaanse u sheegay inaan isku dhaqan ahayn dadbaase ila yaabanoo xagaa nagu wada .
Reply ↓	HanniMuufo	August 12, 2012 • 16:58	Godan,
Meesha masayrba laskuma soo qadin oo anuu crown baan ahoo is hubaye. Adi maxaaba mesha ku soo geliye.
Kaliye ubadkaad xag xaganaysaan naa dhig ku idhi!. Mise intaa wax kabadan baan ku idhi?
Yaadse minwayn u tahay ee ku garanaya?
Hadaan reer Boorame nahay nayaa gobolo badnidaa! Imiso meel baad sheegataa?
Sowdigii bage kaa kale kulahaa waxan ahay Reer Gabiley!.
Saan sheegayba Tuke xaar kama dhamaado. Godana Xin kkkkkkkk Kaftan com.
Reply ↓	Salal	August 12, 2012 • 17:07	Hadhkii-durjiye kkkkkkkkkkkkkkkkk waxan u malaynayaa waqtigaasi inay ahayd 1983-84kii Oo Qaar Reer Dameera-joog ihi ka qayb-galeen orodkii dheeraa,waany araa markay tegayeena waan arkayay iyadoo xaafadayada ka socday uun noqday kii 30 Aad,haddana Geel-jiruu ahaa,sas darteed waa Hibbo Ilaah bixiyo iyo karti ku lammaan qofka.adna waad soo dedaashoo waadse noqon wayday kuwa hibbadaa le imikana caanalaydaaba kaa badin malaha,ha xanaaqin adeer kuma daba socdeekkkkkkkkkkkk
Reply ↓	Salal	August 12, 2012 • 17:09	sixid mid xaafadayada ka socday wuxu galay 30 Aad kii
Reply ↓	HanniMuufo	August 12, 2012 • 17:13	Kkkkkkkk waxase qosol leh,
Godan wadigii lahaa mid Ugaasa baan helaye walise waxbaad doondoniye siday wax u jiraan?. Saxibay hayska kay xumayn anaa ku bari sidi loo soo helo nin ku jeclado. Runti dhaqankaga kuma tilmami karo reero dhan iyo Gobol wayn oo sharafleh. Laakin aad baad u dambaysaa. Xitaa ma awoodid in aad hesho nin waa arin murugo leh. Xirfada shukansiga iyo derejadeedaba ma garanayside maxaadba gobol iyo qabiilo isku dhe dhejisaa. Naftadii baadan qancin karayn. Tiisa daryelaa tu kale wax u tara!.
Teeda kale waa laga ilbaxay in nin qabiil lagu soo jiito. Advances and attraction baay ragan west world joogahi doonayane. Aduu mid iska reer miyi ah oo qaadkiisa aad u dirto ka dalbo melahad marba sheganayso. Sanad kiiba mar aad sidi hablo badan oon garanayo oo suuq ka waayey calamka horay u maray. Hadii kale Miss Muufo hayska xumayn mid aan kaan haysto kadhicin baan kuu soo dabi oo araweelan ahay. Lakin mid saad ku xajisan lahayd waa in aad bugaag badan u aqrisaa iyo newsweeks ka dumarka ee aad gebigaa make over isku samaysaa hahaha talo kuguma nolee adaa ku nool!.
Reply ↓	godan	August 12, 2012 • 21:33	Saaxiibay mahadsanid saad iiga fekerayso nin waa ii joogaa runtii ee xoogaa waa iska kaftan badanahay yarka Geesi Makaahiilna maqaayad kalaan ka wada tirsanahay oo ku kaftana waan kuu fiicnahay Hanni yarey ha iga werwerin.Ramadan karim.
Reply ↓	Marunbaa	August 13, 2012 • 01:02	Durkiye, axmed saalax orod iskumaanu soo gaadhin balse haa dhalintii geesi nimadiisa ku ay ididiilaha siisay baan ahaa, runtii aadna waan ugu fiicnaa middle distance. Sidaadoo kale maalin baa baan xero kubada ka bilaabay waxanan tagnay haramuus. Raga ordayey jimic si bay u ahayd aniguse markaa terain kii tagayba waan gagabay. Oday xun oo gaal ahaa baa yidhi group kayga kuma biiri kartid. Dee maxaa ka qabsaday orodkii iigu horeeyey ka sagaalaad baan baxay midkii lagu soo xidhayeyna ka koowaad markaa sidaad aduu sheegtay anuu hibo iyo karti labadaba waan u lahaa balse orod wakhti masiine ardaynimaan siiyey wakhtigii hadaanse sirta fahan sanahay, i bet you I could qualify to run the olympics both 10km and marathon.
Reply ↓	Marunbaa	August 13, 2012 • 01:09	Sahal, imisaa geel iyo dameero la jooga oo cagta rogi karila. Axmed Salah was gifted when it comes to running saaxiib. Midbaase kaa maqan, wixii wakhti la galiyaba waa laga gun gaadhaa oo olympic gaba wax geel raacaa wuu ku jaryahay.
Reply ↓	timacade	August 13, 2012 • 02:21	Wow, Marubaa I am impressed,,,,,,,,,
Reply ↓	Marunbaa	August 19, 2012 • 00:22	Hildaan albaabka comments ka fur
Faaqidaada Arrimaha Bulshada: Caydu Waa Cad Doqoniimo	Canab IbraHim on Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo…madhabaa on Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo…madhabaa on Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo…ali Ottawa on Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo…ali Ottawa on Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo…mustafe on Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo…Darbisamaroon on Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo…madhabaa on Dhambaal Taageero Iyo Hambalyo…ali Ottawa on Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo…guuleed on Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo…Timacade on Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo…guuleed on Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo…guuleed on Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo…guuleed on Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo…Timacade on Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo…	Dr Cumar Cusmaan Raabe (AUN)Geesiga Dhulkiisa, Guusha U Horseeda, Geerida Dishaay, Geedkaa Ha Go'
Blog Stats	1,204,767 Booqasho - (Mahadsanid Mar Kale Nasoo Bariidi.!)